COVID-19 Ọ bụ ezie na ọ jọgburu onwe ya, oge ọgba aghara n'ime afọ ndị gafeworonụ akpaliwokwa ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama n'akụkọ ihe mere eme ka na-arụ ọrụ taa. Site na ụgbọ ala emere n'oge Middle Ages iji nyere ndị medics aka ịbugharị ndị ọrịa ngwa ngwa, iji teepu teepu n'oge WWII na-enyere ndị agha aka idozi ndị ọrụ ...
Ndị na-akpụzi akpụzi na-elekwasị anya na ịchọta ọgbọ ọzọ
Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere ahịa, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na China na-ebuputakwa ọrụ iji dọrọ ndị na-eto eto. Taa, ịkpọ ndị ọrụ ọgbọ ọzọ abụrụla ihe kachasị mkpa maka ndị nrụpụta China. Amaara m na nke a na-ada ...
A na-edebiri gel silica gel dị ka LSR, nke bụ ngwaahịa nke ndị ahịa na ndị na-emepụta ihe nwere ike ịkwado. A na-eji gel silica gel mmiri mmiri. Ọ nwere ezigbo elasticity, waterproof na mmiri na-eguzogide, na-eguzogide ọgwụ acid, alkali na ndị ọzọ na chemical bekee. Ohaneze ị ...
Learningmụta usoro ịkpụzi plastik plastik nwere ike ịbụ ntakịrị ntakịrị na mbụ. Companylọ ọrụ gị ejirila izu, ọnwa ma ọ bụ ikekwe ọtụtụ afọ nyocha na mmepe iji mepụta ngwaahịa kachasị ọhụrụ, nke kachasị ọhụụ na nke ọma. Na-amalite igwu ala miri emi ma na-eme atụmatụ otú gị ngwaahịa wi ...
Are na-ahọta ihe kwesiri ekwesi maka ngwa gị?
Họrọ ezigbo ihe maka ụdị ngwaahịa ọ bụla dị mkpa iji bulie arụmọrụ na uru nke ngwaahịa a. Echela naanị ihe njedebe nke ngwaahịa gị. Jide n'aka na ị maara ins na out nke otu esi arụ ọrụ akụrụngwa yana ihe ọ ga-abanye na kọntaktị ...